पत्रपत्रिकामा प्रदेश : पूविको २६ औं वार्षिकोत्सव, तालाबन्दी जारी
मुख्य पृष्ठपत्रपत्रिकामा आजपत्रपत्रिकामा प्रदेश : पूविको २६ औं वार्षिकोत्सव, तालाबन्दी जारी
विराटनगर २० पुस । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले पुष्पलाल चोकमा रहेको केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा शनिबार २६ औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ ।
परिसरमा वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा कार्यवाहक उपकुलपति र सेवा आयोगका अध्यक्षको कार्यकक्षको ढोकामा भने आधा दर्जनका दरले ताला झुण्डिएका छन् । दुवैको कार्यकक्षमा ६ महिनादेखि तालाबन्दी जारी छ ।
लामो समयदेखिको समस्याहरुको उचित व्यवस्थापन नहुँदा त्यसको असर वार्षिकोत्सवमा पनि देखियो ।
काम चलाउ कुलपति भएदेखि नै कार्यकक्षमा पस्न नपाएका कार्यवाहक उपकुलपति विजुकुमार थपलियाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा कला, कानून तथा शिक्षा संकायका डीन डा. सम्भुप्रसाद कोइरालाले स्वागत भाषणमै काम चलाउ नेतृत्वबाट विश्वविद्यालय सञ्चालन हुन नसक्ने बताए ।
यस्तै उपकुलपति डा. थपलियाले भने वार्षिकोत्सवलाई सफल बनाउनै पर्ने बताए । उता सममै आसन ग्रहण नगराएपछि प्राध्यापक संघका अध्यक्ष सन्देशदास श्रेष्ठ र कर्मचारी संघका अध्यक्ष राजकुमार सापकोटा अतिथि आसन ग्रहण गर्नै गएनन् । यो समाचार उद्घोष दैनिकमा छ ।
२०१९ मा प्रदेश १ का मुख्य घटना
ब्लाष्ट टाइम्सले सन् २०१९ मा प्रदेश १ का मुख्य घटनाहरुलाई आज प्रमुख समाचार बनाएर छापेको छ । साढे ३३ किलो सुन काण्डसँग जोडिएको मोरङको उर्लाबारीका सनम शाक्यको हत्याको घटना प्रदेश १ को गत वर्ष भएका घटनामध्ये १ प्रमुख घटना हो ।
सुन तस्करी र हत्या प्रकरणका प्रमुख आरोपित गोरे भनिने चुडामणि उप्रेतीसहित ६३ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत मोरङमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
मुख्य आरोपी गोरेसहित प्रहरी अधिकारीहरु विरुद्धको मुद्दामा जिल्ला अदालत मोरङका तत्कालिन न्यायाधीश नायारणप्रसाद शर्माको इजलासले ८ जेठमा पक्राउ परेका ३० जना अभियुक्तमध्ये २८ जनालाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो ।
एकजनालाई समान्य तारेखमा र एक जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । गत ९ माघमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थबाट अवैध रुपमा नेपाल भित्र्याएको साढे ३३ किलो सुन गायब भएपछि सुन खोज्ने क्रममा गोरेको समूहले सनम शाक्यको हत्या गरेको थियो ।
यस्तै पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिका ३ आरुबोटेमा ६ जेठ २०७६ मा ज्वाईँ ससुरासहित दुई परिवारको वंश विनास हुने गरी ९ जनाको हत्या भएको थियो ।
आरुबोटेका बमप्रसाद फियाक, उनका ज्वाइँ धनराज शेर्मासहित २ परिवारका ९ जनाको हत्या भएको थियो । हत्यामा संलग्न रहेको आशंका गरिएका फियाकका कान्छा ज्वाइँ मानबहादुर माखिमको शव झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेको थियो ।
पछिल्लो १ वर्षको अवधिमा विराटनगर जोगवनी नाका हुँदै भारत लैजान लागेका ९५ जना महिला तथा बालबालिकालाई सीमाक्षेत्रबाट उद्दार गरिएको छ ।
दलालले प्रलोभनमा पारेर सन् २०१९ मा बेच्नको लागि जोगबनी नाका हुँदै २१ जना १८ वर्ष मुनीका र ७४ जना १८ वर्षमाथिका महिला गरेर ९५ जना भारततर्फ कटाउने प्रयास गर्दा माइती नेपालले उद्दार गरेको माइती नेपालका मोरङ संयोजक विनोद पोखरेलले बताए । यो खबर अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।